Miganhu yemhepo | Zvazvino Zvinyorwa
Kupenda kwemunyori © Vladimir Kush.
Ini ndinofunga pakanga pari panguva iyo Ebola "yaiita kunge" kuva tyisidziro huru yenguva yedu ndipo pakabuda nyaya iyi.
Zvekudanana zvinyorwa hazvisi zvangu zvehunyanzvi, asi ini ndichiri kutenda (uye ndinovimba) izvo Miganhu yemhepo inyaya yakanaka kune vanorota.
Tinodarika miganhu here?
Pane terevhizheni havana kutaura nezve chimwewo chinhu. Chirwere chinotyisa chinouya kubva kunyika iri kure chakatanga kutora vanhu vekutanga vakatongerwa kugara mumabhokisi ekongiri vasina banga remhepo yakachena, vakavhomorwa nemabhodhoro anovabvumira kufema kufema kwepurasitiki.
Mukusurukirwa kwebindu rakazara nemaruva ejasmine asina hanya, Rafael akabatidza komputa yake, achivimba kuti aigona kumuona, mukadzi uyo, kunyangwe mushure memakore gumi nerimwe, aive achiri kufuridza madandelion mukati medumbu rake. Akavhura kamera yekombuta, achibwaira kanoverengeka kupokana nekutya kwake. Mufananidzo wake wakatsauka, wakafukidzwa nerima riri kuora, wakaratidza mukadzi akachenuruka, akapfeka chifukidziro chakabatana neoksijeni. Munguva idzodzo murume anga achiwira pamusoro penyika. "Uye kufunga kuti mhepo yemahombekombe yakagadzira rudo rwedu," akafunga. Asi aifanira kuratidza chengetedzo, kunyangwe kana Ofelia akatozviitira ivo vese.
- Unonzwa sei?
- Hongu mudiwa wangu.
Matama ake ekurara airatidza zvimwe. Kwakabva kwaita runyararo rwusingaite.
- Haufanire kunetseka.
- Hapasisinazve kukuona.
- ndinokuda, unoziva?
- Uye ini iwe.
Ofelia akaruma muromo, achisimbisa fungidziro dzemurume wake.
Rafael akavhara iyo komputa uye ndokuchema pamusoro payo, akakundwa neiyo intuition iyo kunyangwe mukadzi akaomeswa mukumanikidza kwepfungwa anga asingakwanise kuvhiringidza. Akatarisa tarisa uye akazununguswa nekupedzisira kwekupedzisira kwegungwa. Mapanga asingaonekwe akatsvedza mumhepo uye moyo wake wakarova zvakanyanya kupfuura nakare kose, achitsvaga marara marara eganda rake. Rafael akadzungaira mubindu, achiputa mudzanga, maziso ake akatarisa kumwedzi, chirevo chake munguva dzerima.
Ini handina kuzogona kuitora futi. Akapinda mumba ndokukwira masitepisi, akagadzirira kupedza zvese, kutsakatisa kuomarara kuri muchipfuva chake. Akafamba macorridors machena eimba achiri kuzeza, achipukuta misodzi yake kumadziro. Akavhura musuwo weimba yechitatu uye nekukurumidza akaivhara nekukurumidza, achifamba murima. Rafael akapinda mutirongo umo musuwo wakareruka waive wekutuka kukuru kwerudo kudzamara aona kunhuwirira kwemvura yemaruva, kwakadzora hunyoro muzwi rake. Ivo vadikani vakanyungudika, vachirega zvisvinu zvichibhururuka, vachifunga kuti hapana munhu achauya achivatsvaga kana kubvunza kuti sei murume anga afunga kupira hupenyu hwake kwehusiku hwekupedzisira muparadhiso.
Miganhu yemhepo Yakanga yakanyorwa muna2015 uye yakaburitswa mazuva gare gare pane iyo Falsaria network, uko yakagamuchirwa kwazvo. Ndinovimba wakazvifarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Miganhu yemhepo